Detoxified အရက်သမားများတွင် Striatum ၌ Dopamine ထုတ်လွှတ်မှုအကြီးအကျယ်ကျဆင်းခြင်း - ဖြစ်နိုင်သော Orbitofrontal ပါ ၀ င်မှု (၂၀၀၇) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
Detoxified အရက်ထဲမှာ Striatum အတွက် Dopamine သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာလေးနက် Decrease: ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား Orbitofrontal ပါဝင်ပတ်သက်မှု (2007)
J ကို neuroscience ။ 2007 Nov 14;27(46):12700-6.
Volkow ND, ဝမ် GJ, Telang က F, မုဆိုး JS, Logan J ကို, ဂြနျေး M က, ma Y ကို, Pradhan K သည်, Wong ကကို C.
အမျိုးသားမူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အင်စတီကျု, Bethesda, Maryland က 20892, USA ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
ဆုလာဘ် (သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ) ၏တန်ဖိုးသည်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine တိုးနဲ့ဆက်စပ်နှင့်စကားစပ်တဲ့ function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားနေပါတယ်။ အဆိုပါ prefrontal cortex ဟာယန္တယားစနစ်တကျနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်မူးယစ်ဆေးဝါး, စွဲပြီဆုလာဘ်၏ဆက်စပ်မှီခိုနှင့် fixation မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့က prefrontal cortex နျူကလိယ accumbens အတွက်နှင့်ဤစည်းမျဉ်းစွဲဘာသာရပ်များအတွက်နှောင့်အယှက်ကြောင်း dopamine တိုးပြောင်းလဲပစ်အားဖြင့်ဆုလာဘ်၏တန်ဖိုးကိုထိန်းညှိသောအယူအဆစမ်းသပ်ရန်။
ကျနော်တို့ [အတူဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်တိုင်းတာခြင်း (ထို prefrontal cortex ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography ကိုအသုံးပြု18အတူတိုင်းတာက F] fluorodeoxyglucose) နှင့် dopamine တိုး ([11ကို C] raclopride တစ်ဦး: D2/D3 ကြောင်း binding နှင့်အတူအဲဒီ receptor ligand 20 ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေး methylphenidate အားဖြင့်သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် 20 သောက်သည်အများစုမှာအရက်သမား, detoxified) endogenous dopamine မှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးဘာသာရပ်များအတွက်, methylphenidate သိသိသာသာ striatum အတွက် dopamine တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ventral striatum ခုနှစ်တွင် (ရှိရာနျူကလိယ accumbens တည်ရှိသည်) နှင့် putamen အတွက်, dopamine တိုး methylphenidate ၏အကြိုးသက်ရောက်မှု (မူးယစ်ဆေးအကြိုက်နှင့်မြင့်မားသော) နဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အလှနျ (အသီးသီးထိန်းချုပ်မှုထက် 70 နှင့် 50% အောက်ပိုင်း) အရက်သမားအတွက် attenuated ခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအတွက်, ဒါပေမယ့်အရက်သမားအတွက် orbitofrontal cortex (salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ဒေသ) တွင်ဇီဝြဖစ်အပျက်သဘော ventral striatum အတွက် methylphenidate-သွေးဆောင် dopamine တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်မဟုတ်။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ orbitofrontal cortex ဟာ ventral striatum အတွက် dopamine တိုး၏ပြင်းအားကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့်ဆုလာဘ်၏တန်ဖိုး modulates နှင့်ဤစည်းမျဉ်းများကြောင့်နှောင့်အယှက်စွဲဘာသာရပ်များအတွက်ဆုလာဘ်ဖို့လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုအခြေခံစေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။
ဆုလာဘ် (သဘာဝဆုလာဘ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ) ၏တန်ဖိုးသည်နျူကလိယ accumbens အတွက် dopamine တိုးနဲ့ဆက်စပ်နှင့်စကားစပ်တဲ့ function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားနေပါတယ်။ အဆိုပါ prefrontal cortex ဟာယန္တယားစနစ်တကျနားလည်သဘောပေါက်ကြသည်မဟုတ်ပေမယ့်မူးယစ်ဆေးဝါး, စွဲပြီဆုလာဘ်၏ဆက်စပ်မှီခိုနှင့် fixation မြင့်မားတဲ့တန်ဖိုးပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ ဤတွင်ကျနော်တို့က prefrontal cortex နျူကလိယ accumbens အတွက်နှင့်ဤစည်းမျဉ်းစွဲဘာသာရပ်များအတွက်နှောင့်အယှက်ကြောင်း dopamine တိုးပြောင်းလဲပစ်အားဖြင့်ဆုလာဘ်၏တန်ဖိုးကိုထိန်းညှိသောအယူအဆစမ်းသပ်ရန်။ ကျနော်တို့ [အတူဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်တိုင်းတာခြင်း (ထို prefrontal cortex ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography ကိုအသုံးပြု18အတူတိုင်းတာက F] fluorodeoxyglucose) နှင့် dopamine တိုး ([11ကို C] raclopride တစ်ဦး: D2/D3 ကြောင်း binding နှင့်အတူအဲဒီ receptor ligand 20 ထိန်းချုပ်မှုအတွက်လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေး methylphenidate အားဖြင့်သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် 20 သောက်သည်အများစုမှာအရက်သမား, detoxified) endogenous dopamine မှအထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးဘာသာရပ်များအတွက်, methylphenidate သိသိသာသာ striatum အတွက် dopamine တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ventral striatum ခုနှစ်တွင် (ရှိရာနျူကလိယ accumbens တည်ရှိသည်) နှင့် putamen အတွက်, dopamine တိုး methylphenidate ၏အကြိုးသက်ရောက်မှု (မူးယစ်ဆေးအကြိုက်နှင့်မြင့်မားသော) နဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အလှနျ (အသီးသီးထိန်းချုပ်မှုထက် 70 နှင့် 50% အောက်ပိုင်း) အရက်သမားအတွက် attenuated ခဲ့ကြသည်။ ထိန်းချုပ်မှုအတွက်, ဒါပေမယ့်အရက်သမားအတွက် orbitofrontal cortex (salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ဒေသ) တွင်ဇီဝြဖစ်အပျက်သဘော ventral striatum အတွက် methylphenidate-သွေးဆောင် dopamine တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်မဟုတ်။ ဤရွေ့ကားရလဒ်များ orbitofrontal cortex ဟာ ventral striatum အတွက် dopamine တိုး၏ပြင်းအားကိုထိန်းညှိခြင်းဖြင့်ဆုလာဘ်၏တန်ဖိုး modulates နှင့်ဤစည်းမျဉ်းများကြောင့်နှောင့်အယှက်စွဲဘာသာရပ်များအတွက်ဆုလာဘ်ဖို့လျော့နည်းသွား sensitivity ကိုအခြေခံစေခြင်းငှါ၎င်းအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။
dopamine (DA) တွင်တိုးမြှင့် (အရက်အပါအဝင်အလွဲသုံးစားမှုတ္ထုများဖို့အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေနေကြတယ်Koob et al ။ , 1998), ဒါပေမယ့်စွဲအခြေခံသည့်ယန္တရား (s) ကိုအများကြီးလျော့နည်းရှင်းပါတယ်။ ဒါဟာ (စွဲလမ်း၏ neurobiology အခြေခံကြောင်း DA အားဖြင့် modulated ဒေသများတွင်သပ္ပါယ်အပြောင်းအလဲများကို (ဆားကစ်) အတွက်နာတာရှည်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုရလာဒ်များယုံကြည်Robbins နှင့် Everitt, 2002; Nestler, 2004) ။ ယင်းတို့အနက်, အ prefrontal cortex ပို. ပို. စွဲနေတဲ့ဗဟိုအခန်းကဏ္ဍကစားခြင်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းဖြစ်သည် (Jentsch နှင့်တေလာ, 1999) ။ (အသီးသီး, အ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) နှင့် DA ဆဲလ်များ၏ပစ်ခတ်ပုံစံကိုထိန်းညှိခြင်းနှင့် DA လွှတ်ပေးရန်၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍဖြစ်သောနျူကလိယ accumbens (NAc), မှ prefrontal cortical efferents အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာများမှာGariano နှင့်အာရှရပင်, 1988; Murase et al ။ , 1993) ။ အမှန်စင်စစ် preclinical လေ့လာမှုများ (စွဲရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့ကြောင်းမူးယစ်ဆေးစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့၏ဆုံးရှုံးမှုကိုအခြေခံမှတွေးဆခဲ့ကြရသောနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးထိတွေ့မှုနှင့်အတူဤလမ်းကြောင်းအတွက်အပြောင်းအလဲမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြအဖြူရောင် et al ။ , 1995; Kalivas, 2004).
ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအရက်ထဲမှာ prefrontal cortex အားဖြင့်ဦးနှောက်ကို DA လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဦးနှောက် DA လှုပ်ရှားမှုအကဲဖြတ်ရန်, ငါတို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) အသုံးပြု [11ကို C] raclopride (DA: D2/D3 ကြောင်း endogenous DA အားဖြင့်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့အထိခိုက်မခံဖြစ်ပါတယ် binding နှင့်အတူအဲဒီ receptor radioligand) (Volkow et al ။ , 1994a) မီနှင့်အပြီးသွေးကြောသွင်း methylphenidate (အမတ်) နဲ့စိန်ခေါ်မှုနှင့် 20 အကြားတုံ့ပြန်မှုအရက်သမားနှင့် 20 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု detoxified နှိုင်းယှဉ်။ က DA ပို့ဆောင်ရေး (DATs) ပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် DA တိုးပွါးနှင့်အရှင် DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှု (၏သွယ်ဝိုက်အကဲဖြတ်ဘို့ခွင့်ပြုဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျနော်တို့ pharmacological စိန်ခေါ်မှုအဖြစ်အမတ်ကိုအသုံးပြုVolkow et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါ prefrontal cortex ၏လုပ်ဆောင်မှုကိုအကဲဖြတ်ဖို့, ကျနော်တို့ (ဦးနှောက် function ကိုတစ်အမှတ်အသားအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရသောဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်, တိုင်းတာSokoloff et al ။ , 1977), ပေသုံးပြီးနှင့် [18F ကို] fluorodeoxyglucose (FDG) ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်လုပ်ယူဆချက်အရက်ဘာသာရပ်များအတွက် prefrontal cortex အားဖြင့် DA ဦးနှောက်လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းနှောင့်အယှက်များနှင့်သူတို့ DA လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားကြလိမ့်မယ်လို့မည်ဖြစ်ကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဒါ့အပြင်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်-သွေးဆောင် striatal DA တိုးယင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (နှင့်ဆက်နွယ်နေသောကြောင့်Volkow et al ။ , 1999), ငါတို့သည်လည်းအမတ်များ၏ပျြောမှေ့စဆိုးကျိုးများ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အမြင်တစ်ခုတုံးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြမယ်လို့အရက်သမားအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်လျှော့ချကြောင်းတွေးဆ။
နှစ်ဆယ်အထီးအရက်ဘာသာရပ်များနှင့် 20 အထီးကျန်းကျန်းမာမာထိန်းချုပ်မှုကိုလေ့လာခဲ့ကြသည်။ အရက်သမားကုထုံးလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ကြော်ငြာများကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ စားပွဲတင် 1 ဘာသာရပ်များ၏လူဦးရေအချိုးအစားနှင့်လက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများပေးပါသည်။ အနည်းဆုံးနှစ်ခု Clinician သူတို့တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးကြောင်းသေချာစေရန်လူနာအင်တာဗျူး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM), စတုတ္ထတည်းဖြတ်မူ, အရက်သောက်များအတွက်ရောဂါရှာဖွေစံ, DSM စံသုံးပြီး semistructured စံချိန်စံညွှန်းမီအင်တာဗျူးနှင့်အတူ။ ပါ ၀ င်မှုစံသတ်မှတ်ချက်အရ၎င်းတို့တွင်အရက်အလွန်အကျွံစားဖူးသူဆွေမျိုးတစ် ဦး ရှိရန်လိုအပ်သည်။ သူတို့သည်အရက်နှင့်နီကိုတင်းမှအပပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်စွဲလမ်းမှုသမိုင်းရှိခဲ့လျှင်ဘာသာရပ်များကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ဖယ်ထုတ်ခြင်းစံသတ်မှတ်ချက်များတွင်စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာရောဂါ (အရက်မှီခိုခြင်း မှလွဲ၍) သို့မဟုတ်အာရုံကြောရောဂါ၊ ဦး နှောက်လုပ်ဆောင်မှု (ဥပမာနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာ၊ endocrinological၊ ကင်ဆာရောဂါသို့မဟုတ် autoimmune ရောဂါများ) ကိုပြောင်းလဲနိုင်သောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများ၊ ဆေးညွှန်းနှင့်ဆေးညွှန်းမပါသောဆေးဝါးများပါ ၀ င်သည်။ နှင့် / သို့မဟုတ်> မိနစ် ၃၀ ကြာသောသတိရှိခြင်းနှင့်အတူခေါင်းကိုက်ခြင်း။ အားလုံးဘာသာရပ်များ Hamilton ကစိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ (Hamilton က, 1959) နှင့် Hamilton ကစိတ်ကျရောဂါ (Hamilton က, 1960) ရမှတ်များ <19 နှင့်လေ့လာမှုမတိုင်မီအနည်းဆုံးd30 ရက် alcohol သောက်သုံးခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ခဲ့ကြရသည်။ ဒေသတွင်းသတင်းစာများမှကြော်ငြာများမှထိန်းချုပ်မှုများကိုရရှိခဲ့သည်။ အရက်မှီခိုမှုသို့မဟုတ်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်စရိတ်မှအပဖယ်ထုတ်ထားသည့်စံသတ်မှတ်ချက်များသည်အရက်စွဲသူများနှင့်တူညီသည် အကယ်၍ ၎င်းတို့တွင်မိသားစုရာဇ ၀ င်ရှိပါကထိန်းချုပ်မှုဘာသာရပ်များကိုဖယ်ထုတ်ပစ်ခဲ့သည်။ ဘာသာရပ်အားလုံးသည်ကာယ၊ စိတ်ရောဂါနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စိတ်ပညာဆိုင်ရာဆေးဝါးများအသုံးပြုခြင်းကိုဖယ်ထုတ်ရန် PET လေ့လာမှုပြုသည့်အချိန်တွင်ဆေးမျက်နှာပြင်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ PET စစ်ဆေးခြင်းမတိုင်မီ ၂ ပတ်အလိုတွင်ဆေးဝါးများမသောက်သုံးရန်ဘာသာရပ်များကိုဘာသာရပ်များအားညွှန်ကြားထားပြီး PET scan မတိုင်မီတစ်ပတ်အလိုတွင်အရက်မသောက်ရန်တားမြစ်ထားသည်။ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာများ (ရေမှ လွဲ၍) သည်အနည်းဆုံး ၄ နာရီမတိုင်မီနှင့်စီးကရက်ကိုလေ့လာမှုမတိုင်မီအနည်းဆုံး ၂ နာရီကြာရပ်နားခဲ့သည်။ ဤလေ့လာမှုကို Brookhaven အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်းရှိ Institutional Review Board မှအတည်ပြုပြီး၊ ဘာသာရပ်အားလုံးမှရေးသားထားသောအသိပေးသဘောတူညီချက်ရရှိခဲ့သည်။
မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများများအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings (1-10) (ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်အမတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်မတိုင်မီမှတျတမျးတငျထားနှင့် 27 မိခဲ့ကြဝမ် et al ။ , 1997) ။ မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများဤ Self-အစီရင်ခံစာများ (လေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တသမတ်တည်းဖြစ်ပြခဲ့ကြFischman နှင့် Foltin, 1991) ။ နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်အမတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်မီနှင့်အခါအားလျော်စွာစောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။
ပေလေ့လာမှုများသုံးရှုထောင် mode မှာတစ်ဦး Siemens (Iselin, NJ) HR + tomograph (resolution ကို full-width ကို 4.5 × 4.5 × 4.5 မီလီမီတာဝက်အများဆုံး) နဲ့ပြုမိခဲ့သည်။ အားလုံးဘာသာရပ်များ [ပြုနှစ်ခု Scan ဖတ်ပြီးစီး11ကို C] ကအရက်သမား၏ raclopride နှင့်ထိန်းချုပ်မှုများ 19 နှင့် 19 FDG နှင့်အတူပြုသောအမှုတတိယစကင်ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ အဆိုပါ Scan ဖတ်မယ့်2ဃကာလအတွင်းပြီးစီးခဲ့ကြသည်နှင့်အမိန့် randomized ခဲ့သည်။ နည်းလမ်းများအဘို့ထုတ်ဝေခဲ့ [11ကို C] raclopride (Volkow et al ။ , 1993a) နှင့် FDG များအတွက် (ဝမ် et al ။ , 1993) ။ အတွက် [11ကို C] raclopride Scan ဖတ် [နှစ်ခု Scan ဖတ်၏တဦးတည်း (ဆား၏3cc) သွေးကြောသွင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာပြီးနောက်ပြုလေ၏, နှင့်အခြားသော (0.5 / ကီလိုဂရမ် mg) သွေးကြောသွင်းအမတ်ပြီးနောက်ပြုလေ၏ရှေ့တော်၌, 1 မိပေးခဲ့ရာ11ကို C] raclopride ဆေးထိုး။ အဆိုပါလေ့လာမှု single-မျက်စိကန်း crossover ဒီဇိုင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ dynamic Scan ဖတ် [ချက်ချင်း၏ 4-10 MCI ၏ဆေးထိုးပြီးနောက်စတင်ခဲ့ခဲ့ကြသည်11ကို C] raclopride (တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှု, bombardments ၏အဆုံးမှာ 0.5-1.5 Ci / μm) နှင့် 54 မိ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းရရှိသောခဲ့ကြသည်။ သွေးလွှတ်ကြောသည်အသွေး [မပြောင်းလဲများ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကိုတိုင်းတာရန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်လျှောက်လုံးရယူခဲ့ပါတယ်11ကို C] ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ပလာစမာထဲမှာ raclopride (Volkow et al ။ , 1993a) ။ FDG အတွက်မူအတိုင်းအတာများကို အခြေခံ၍ ပြုလုပ်ခဲ့သည် (stimulation မရှိ) နှင့် FDG ၏ 20-35 mCi ဆေးထိုးပြီးနောက်မိနစ် ၂၀ ထုတ်လွှတ်မှုစကင်ကိုစတင်ခဲ့ပြီးပလာစမာတွင် FDG ကိုတိုင်းတာရန်သွေးလွှတ်ကြောကိုအသုံးပြုသည်။ စုပ်ယူသည့်အချိန်တွင်ဘာသာရပ်များသည်အလင်းရောင်မှောင်မိုက်နေသောအခန်းတစ်ခန်းတွင်မျက်စိကိုဖွင့်ထားကာညနေခင်း၌ဆူညံသံကိုအနိမ့်ဆုံးအထိထားခဲ့သည်။ ဇီဝဖြစ်စဉ်နှုန်းထားများ Sokoloff ရဲ့မော်ဒယ်တစ်ခု extension ကိုအသုံးပြု။ တွက်ချက်ခဲ့ကြသည် (Phelps et al ။ , 1979).
အတွက် [11ကို C] raclopride ပုံများ, အကျိုးစီးပွား (ROIs) ၏ဒေသများအတွက် [မှတိုက်ရိုက်ရယူခဲ့ကြသည်11ကို C] raclopride ပုံရိပ်တွေယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ (Volkow et al ။ , 1994a) ။ အတိုချုပ်ကျနော်တို့ချုပ်ဖော်ပြကျနော်တို့ (CDT) caudate အတွက်ဒေသများကိုရှေးခယျြထားတဲ့အထဲက intercommisural လေယာဉ်တလျှောက် resliced ​​ခဲ့ပုံရိပ်တွေ (ပြောင်းလဲနေသောပုံရိပ်များကိုမိ 10 မှ 54 ထံမှယူ), putamen (ထား), ventral striatum (VS), နှင့် cerebellum အပေါ်ရွယ်မရွေး ။ ဤရွေ့ကားဒေသများထို့နောက်တွက်ချက်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြရာ, အချိန်သာရှိပြီးပြည်ပမှကို C-11 ၏ပြင်းအားရယူဖို့ပြောင်းလဲနေသော Scan ဖတ်မှ projected ခဲ့ကြသည် K1 (ပလာစမာကနေတစ်သျှူးဖို့စဉ်ဆက်မပြတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး) နှင့်ဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ် (DV), CDT အတွက်ပလာစမာအာရုံစူးစိုက်မှုမှတစ်ရှူးအာရုံစူးစိုက်မှု၏အချိုးအစား၏ equilibrium တိုင်းတာခြင်းမှကိုက်ညီသော ထား. , VS Reversible လုပ်စနစ်များများအတွက်သော graphical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ technique ကိုသုံးပြီး (Logan et al ။ , 1990) ။ ကိုက်ညီသည့် cerebellum အတွက်မှ striatum အတွက် DV ၏အချိုးအစား, Bmax ကို'/Kd'+ 1 (Kd'နှင့် Bmax ကို'' ပုထိရောက်သောများမှာ Vivo အတွက် endogenous neurotransmitter နှင့် binding nonspecific ၏ရှေ့တော်၌ရုံကလွဲပြီး), D ကိုတစ်ဦးခန့်မှန်းချက်အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်2/D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Logan et al ။ , 1990) ။ [အပေါ်ပါလီမန်အမတ်များ၏သက်ရောက်မှုများ11ကို C] binding အတွက်ရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှုအဖြစ် quantified ခဲ့ကြသည် raclopride Bmax ကို'/Kd'' ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (မှီခို variable ကို) မှ။
ယခင်ကဖော်ပြထားနှင့်နမူနာအဖြစ်ဇီဝဖြစ်စဉ်ပုံရိပ်တွေအဘို့, ကျွန်တော်တစ်ဦးဦး-ဖော်ထုတ် prefrontal ဒေသများ [orbitofrontal cortex (OFC), cingulate gyrus (CG), dorsolateral prefrontal] (1) တစ်ခု automated ထုတ်ယူခြင်းနည်းလမ်းကိုသုံးပြီးရွယ်ထုတ်ယူ, preclinical လေ့လာမှုများပြုလုပ်ပြခဲ့ကြသောကြောင့်, သူတို့ DA လွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိ; (2) striatal ဒေသများ (CDT, ဝတ်, VS) ဤ DA ဆိပ်ကမ်း၏အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်သောကြောင့်, (3) limbic ဒေသများ (amygdala, hippocampus, insula), သူတို့ကလည်း DA ဆိပ်ကမ်း၏ပစ်မှတ်များမှာကြောင့်၎င်း, နှင့် (4) thalamic, ယာယီ, parietal, occipital, ကြှနျုပျတို့ထိန်းချုပ်မှုဒေသများအဖြစ်ကုသရသော cerebellar ဒေသများ, (Volkow et al ။ , 2006) ။ အတိုချုပ်အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဇီဝဖြစ်စဉ်ပုံရိပ်များကိုပထမ ဦး ဆုံး MNI (Montreal အာရုံကြောဆိုင်ရာအင်စတီကျု) ဦး နှောက်အာကာသအတွင်းသို့လူတစ် ဦး ချင်း၏ ဦး နှောက်ကိုအမျိုးမျိုးကွဲပြားစေရန်ဖယ်ထုတ်ခဲ့သည်။ ROI တွက်ချက်မှုများကိုပြုလုပ်ရန် Talairach Daemon ဆော့ဖ်ဝဲ၏သြဒီနိတ်များအရသက်ဆိုင်ရာနယ်မြေအတွက်သက်ဆိုင်ရာ voxels အားလုံးဖုံးလွှမ်းထားသည့်မြေပုံကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။Collins et al ။ , 1995; Lancaster et al ။ , 2000) ကို FDG ပေပုံရိပ်သို့။
အမတ်အပေါ်များ၏သက်ရောက်မှုများ K1 နှင့် D ကိုပေါ်2/D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Bmax ကို'/Kd') နှင့်အခြေခံမှာအမတ်တုံ့ပြန်အတွက်အုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုအကြား-ဘာသာရပ်များထဲမှအချက် (အရက်သမား vs ထိန်းချုပ်မှု) နှင့်တဦးတည်းအတွင်း-ဘာသာရပ်အချက် (အမတ် vs ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) နဲ့ ANOVA နှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ Post ကို hoc t ကို စမ်းသပ်မှုများကွဲပြားအခြေအနေ၏အရာဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အတွက်အမတ်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအကြားအသင်းအဖွဲ့အကဲဖြတ်ရန် Bmax ကို'/KdCDT, ထား. , VS နှင့်ဒေသတွင်းဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်အတွက် '(မှီခို variable ကို), ကျနော်တို့ကဇီဝဖြစ်စဉ်အစီအမံအပေါ် Pearson ထုတ်ကုန်ယခုအချိန်တွင်ဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုအတွက်မဟုတ် prefrontal ဒေသများတွင်အရက်သမားဇီဝြဖစ်အတွက် [CG, OFC နှင့် dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC)] အတွက်အမတ်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများနှင့်ဆက်စပ်မည်ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာမှု (1) ၏သုံးခုအဓိကယူဆချက်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ Bmax ကို'/Kd'(မှီခို variable ကို), (2) အမတ်ပြောင်းလဲမှုများသွေးဆောင်ကြောင်း Bmax ကို'/Kd'' အတွက်ပြောင်းလဲထိန်းချုပ်မှုထက်အရက်သမားအတွက်သေးငယ်, နှင့် (3) ဖြစ်လိမ့်မယ် Bmax ကို'/Kd'' VS အတွက်အမတ်များ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုနှင့်အတူဆက်နွယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အရှင် "မူးယစ်ဆေးအကြိုက်" နှင့် "အဆင့်မြင့်" ကို ratings ထိန်းချုပ်မှုထက်အရက်သမားအတွက်အနိမ့်ပါလိမ့်မယ်, ငါတို့မှာအရေးပါမှုအဆင့်သတ်မှတ်ထား p <0.05 ။ အတွက်အပြောင်းအလဲများအကြားဆက်စပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်ရေနံရှာဖွေရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသည် Bmax ကို'/Kd'(မှီခို variable ကို) နှင့်သတ်မှတ်ထားသောတစ်ဦးမဟုတ်ခဲ့ကြသော 11 ROIs အတွက်ဇီဝြဖစ်ကျနော်တို့မှာအဓိပ်ပာယျကိုသတ်မှတ် p <0.005 ။ ဆက်စပ်မှုဒေသဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုထက်ခြုံငုံအကြွင်းမဲ့အာဏာဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုထင်ဟပ်ကြောင်းမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြနိုင်ရန်, ငါတို့ကိုလည်းပုံမှန်ဒေသဆိုင်ရာဇီဝဖြစ်စဉ်အစီအမံ (ဒေသဆိုင်ရာဇီဝြဖစ် / မြေတပြင်လုံး - ဦး နှောက်အကြွင်းမဲ့အာဏာဇီဝြဖစ်) အပေါ်ဆက်စပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်။ အုပ်စုများအကြားဆက်စပ်မှုအပေါ်ခြားနားချက်များ Regression များအတွက်တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုခြုံငုံစမ်းသပ်သုံးပြီးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
ယခင်လေ့လာမှုများငါတို့သည်: D ၏အခြေခံအစီအမံများအကြားတစ်ဦးဆက်စပ်မှုမြင်ကြပြီဆိုသောကြောင့်2/D3 ကိုကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့် prefrontal ဇီဝြဖစ် (Volkow et al ။ , 1993b, 2001), ငါတို့သည်လည်းအလားတူအသင်းအဖွဲ့အရက်ဘာသာရပ်များအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ဤဆက်စပ်မှုအကဲဖြတ် (အရေးပါမှုမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် p <0.05) ။
လွှတ်တော်အမတ်၏ plasma ပြင်းအား
(မီလီမီတာနှုန်း nanograms အတွက်) plasma ပြင်းအား 10 ± 116 (26 မိ (107 ± 16 vs 30 ± 85), သို့မဟုတ် 25 မိ, 76 မိ (အသီးသီး 12 ± 45 vs 65 ± 15) မှာထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အရက်ဘာသာရပ်များအကြားကွဲပြားဘူး ) 59 ± 11 vs ။ အဆိုပါပလာစမာအမတ်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်အမတ်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူမပတျသကျဘူး Bmax ကို'/Kd'' ။
(နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများမှာတော့အမတ်သိသိသာသာp <0.005) ခံစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါး, မြင့်မားသော, နာမငြိမ်, လှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးကောင်းသော, မူးယစ်ဆေးဝါးအကြိုက်, မူးယစ်ဆေးဝါးမကြိုက်ဘူး, အရက်ကိုအလိုဆန္ဒနှင့်ဆေးရွက်ကြီးအလိုဆန္ဒများအတွက် Self- အစီရင်ခံစာများအပေါ်ရမှတ်များတိုးပွားလာ (စားပွဲတင် 2) ။ အဆိုပါအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု ((အရက်များအတွက်နာမငြိမ်ခြင်းနှင့်အလိုဆန္ဒ မှလွဲ. ) မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏ Self-အစီရင်ခံစာများအများစုအဘို့အသိသာခဲ့သည်စားပွဲတင် 2). Post ကို hoc t ကို စမ်းသပ်မှုများ (အမတ်သက်ရောက်မှုမြင့်မားသောအဘို့အရက်သမားထက်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်သိသိသာသာပိုမိုကြီးမားခဲ့ထင်ရှားp <0.003), လှုံ့ဆော် (p <0.003), မူးယစ်ဆေးဝါးခံစားရ (p <0.004), မူးယစ်ဆေးဝါးကောင်းသော (p <0.04) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးအကြိုက်p <0.04) နှင့်ဆေးရွက်ကြီးဆန္ဒရှိဘို့အရက်သမားအတွက်သာ။ ကြီးမြတ် (p <0.002) နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးမကြိုက် (p <0.05) ။
ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်အရက်ဘာသာရပ်များအတွက်သွေးကြောသွင်းအမတ်များ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့် F အုပ်စုများအတွက် factorial အထပ်ထပ် ANOVA များအတွက်တန်ဖိုးများကို, မူးယစ်ဆေးများနှင့်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု
အမတ်နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်နှလုံးကျုံ့နှင့် diastolic သွေးဖိအားတိုးလာ, ဤဆိုးကျိုးများ (Data ပြမဟုတ်) အဖွဲ့များအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။
DA: D ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ2/D3 အခြေခံမှာအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (ရလဒ်များအရအိပ်ယာ)
အခြေခံမှာ, မကွဲပြားမှုရှိကြ၏ K1 cerebellum, CDT, ထား, ဒါမှမဟုတ် VS (ထဲမှာအုပ်စုများအကြားစားပွဲတင် 3) ။ ဆနျ့ကငျြ, D ကို2/D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (Bmax ကို'/Kd') (VS အတွက်သိသာထင်ရှားသောအုပ်စုတစ်စုအကျိုးသက်ရောက်ပြသp <0.007) ဒါပေမယ့် CDT နှင့် PUT မကွဲပြားမှု။ Post ကို hoc t ကို စမ်းသပ်မှု VS: D ကြောင်းပြသ2/D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (အရက်သမားအတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့p <0.05) (စားပွဲတင် 3).
များအတွက်ဆောင်ရွက်ချက်များ K1 နှင့် Bmax ကို'/Kd' အတွက် [11ကို C] ထိန်းချုပ်မှုအဘို့နှင့်နှင့်အတူအရက်ပုရလဒ်များအရအိပ်ယာများအတွက်ဘာသာရပ်များ (PL) နှင့်အမတ်အခြေအနေများ, များအတွက် raclopride ပုံရိပ်တွေ p အုပ်စုများအတွက် ANOVA ရလဒ်များကိုများအတွက်တန်ဖိုးများကို, မူးယစ်ဆေးများနှင့်အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှု
DA: D ၏ဆောင်ရွက်ချက်များ2/D3 လွှတ်တော်အမတ်အပြီးအဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (DA အပြောင်းအလဲများကို)
ယင်းအပေါ် ANOVA K1 အစီအမံ (မူးယစ်ဆေးဝါးမအပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုမ CDT အတွက်သိသာထင်ရှားသောဖြစ်ကြောင်းထင်ရှား, မထားရ VS, ဒါမှမဟုတ် cerebellum, အမတ် radiotracer ပေးပို့မပြောင်းခဲ့ဘူးကြောင်းညွှန်ပြပေးသောနှင့်အုပ်စုများအကြားအဘယ်သူမျှမကွဲပြားမှုရှိစားပွဲတင် 3).
အမတ်ယုတ်လျော့ Bmax ကို'/Kd'နှင့် ANOVA (CDT အတွက်သိသာထင်ရှားသောမူးယစ်ဆေးအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားF = 19; p <0.001), PUT (F = 54; p <0.0001) နှင့် VS (F = 41; p <0.001), ကြောင်းညွှန်ပြပေးသော Bmax ကို'/Kd'' သိသိသာသာနှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်အမတ်တို့ကလျှော့ချခဲ့ပါတယ် (ကြည့်ရှု သဖန်းသီး။ 2, စားပွဲတင် 3) ။ အဆိုပါအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှု (ထားဘို့သိသာခဲ့သည်F = 5.5; p <0.03) နှင့် VS (F = 13; p <0.001), ဤဒေသများရှိတုံ့ပြန်မှုအုပ်စုများအကြားကွဲပြားကြောင်းဖော်ပြသည်သော။ The post ကို hoc t ကို စမ်းသပ်မှုအမတ်နှင့်အတူလျှော့ချထားအတွက်အရက်သမား (ထိန်းချုပ်မှု, အရက်သမား vs 21%, 11% အတွက်သိသိသာသာသေးငယ်ခဲ့ထင်ရှား; p <0.03) နှင့် VS (ထိန်းချုပ်မှု၊ ၂၇%၊ အရက်နှင့် ၈%; p <0.002) (သဖန်းသီး။ 1, စားပွဲတင် 3).
[များအတွက် DV အချိုး (DVR) ပုံရိပ်တွေများအတွက်ပျမ်းမျှ11ထိန်းချုပ်မှုအဘို့ကို C] raclopride (n = 20) နှင့်အရက်သမား (n ရလဒ်များအရအိပ်ယာပြီးနောက်များနှင့်အမတ်ပြီးနောက် striatum ရဲ့အဆင့်မှာ = 20) ။ တိကျတဲ့အတွက်ကျဆင်းခြင်းအမတ်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်အရက်ဘာသာရပ်များအတွက်အမတ်ဖို့ attenuation တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူ (DV အချိုး) binding သတိပြုပါ။
အတွက်သေးငယ်အပြောင်းအလဲများရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ Bmax ကို'/Kd'' ထိန်းချုပ်မှုထက်အရက်သမားအတွက် (ထား VS) ဆေးလိပ်သောက်သူတို့၏ သာ. ကြီးမြတ်အရေအတွက်ကရောင်ပြန်ဟပ်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စုသီးခြားစီကွေထံမှဆေးလိပ်သောက်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အောက်ပါပြသခဲ့သည်: (1) သောက်သည်သူထိန်းချုပ်မှု (n = 3) (မသောသူထက်အလားတူအပြောင်းအလဲများရှိခဲ့n ထားအတွက် = 17) အသီးသီး 20% vs (21,) နှင့် VS အသီးသီး 35% vs (26,); နှင့် (2) (သောက်သည်သူအရက်သမားn = 16) (မသောသူထက်အလားတူအပြောင်းအလဲများရှိခဲ့n ထားအတွက် = 4) အသီးသီး 11% vs (12,) နှင့် VS အသီးသီး 8% vs (6,) ။
ယင်းနမူနာအပြီးသတ်သောရလဒ်များကိုလိုက်လျောဖို့သိပ်သေးငယ်ပေမယ့်အဲဒီနှိုင်းယှဉ်၏အဘယ်သူမျှမအတွက်အတွက်အပြောင်းအလဲများကိုခဲ့ကြသည် Bmax ကို'/Kdအရက်သမားအတွက်သေးငယ်အပြောင်းအလဲများကိုဆေးလိပ်သောက်ဖို့ပဲတွေကပေါ်ကနေမစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအကြံပြုသောဆေးလိပ်သောက်သူများအတွက် '' သေးငယ်။
အတွက်အမတ်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု Bmax ကို'/Kd'နှင့် D ကို၏အခြေခံအစီအမံတွေနဲ့2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု
မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက် (ထိန်းချုပ်မှု, 36.4 ±4μmol / 100 g / မိ; အရက်သမား, 35.0 ±4μmol / 100 ပါ g / မိနစ်) ကိုမမျှမဒေသဆိုင်ရာဇီဝြဖစ် (Data ပြမဟုတ်) အဖွဲ့များအကြားကွဲပြားပါတယ်။
အတွက်ထိန်းချုပ်မှုများတွင်အမတ်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများ Bmax ကို'/KdVS ရှိ OF OFC ရှိဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်အဆိုးဆက်စပ်မှုရှိခဲ့သည် [Brodmann's area (BA) 11: r = 0.62, p <0.006; BA 47: r = 0.60, p <0.008] DLPFC (BA ၉ - r = 0.59, p <0.01), CG (BA 32: r = 0.50 p <0.04; BA 24: r = 0.52, p <0.03) နှင့် insula (r = 0.63; p <0.005) ။ (သဖန်းသီး။ 2). Bmax ကို'/Kd'' CDT နှင့်ထားပြောင်းလဲမှုများသာ (CG အတွက်ဇီဝြဖစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်r > 0.51; p <0.03) ။ အရက်သမားများတွင်အမတ် - သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအကြားဆက်စပ်မှု Bmax ကို'/Kd'နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဇီဝြဖစ် (သိသိသာသာမဟုတ်ကြသဖန်းသီး။ 2) ။ အဆိုပါအုပ်စုများအကြားဆုတ်ယုတ်တောင်စောင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် (ဆက်စပ်မှု OFC အတွက်သိသိသာသာကွဲပြားကြောင်းထင်ရှားz = 2.3; p <0.05), DLPFC (z = 2.2; p <0.05), CG (z = 2.2; p <0.05) နှင့် insula (z = 2.6; p <0.01) ။
အတွက်ရာခိုင်နှုန်းအပြောင်းအလဲများကြားက Regression တောင်စောင်း Bmax ကို'/Kd'(မှီခို variable ကို) VS နှင့် OFC (BA 11) တွင်အကြွင်းမဲ့အာဏာဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှု, anterior CG (BA 32), နှင့် DLPFC (BA 9) ထိန်းချုပ်မှုအတွက် (ဖြည့်စက်ဝိုင်း) နှင့်အရက်သမား (ပွင့်လင်းစက်ဝိုင်း) ၌တည်၏။ [တိကျတဲ့အတွက်ရာခိုင်နှုန်းလျှောက်လျော့နည်း၏ binding မှတ်ချက်11ကို C] raclopride (Bmax ကို'/Kd') ဆွေမျိုး DA တိုးထင်ဟပ်နှင့်အရှင်ဆုတ်ယုတ်နေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုသဘောဆောငျ: အ DA တိုး သာ. , အဇီဝြဖစ်အောက်ပိုင်း။
ပုံမှန်ဇီဝဖြစ်စဉ်အစီအမံ (တိုင်းဒေသကြီး / မြေတပြင်လုံး-ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်) နှင့်အတူဆက်စပ်မှုရှိသောအကြားအပြောင်းအလဲများများအတွက်သိသာခဲ့သည် Bmax ကို'/Kd'(VS နှင့် OFC အတွက်r = 0.62; p <0.006) ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ပေမယ့်မရ ()သဖန်းသီး။ 3) ။ ဤသည်မှာဆက်စပ်မှု (ထိုအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားz = 2.1; p <0.05) ။
အခြေခံအားဖြင့်ဆက်စပ်မှု Bmax ကို'/Kd'(: D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု) နှင့်ဒေသဆိုင်ရာဇီဝြဖစ် CG (CDT အတွက်ထိန်းချုပ်မှုအရက်သမားများအတွက်သိသာပေမယ့်မ: r = 0.57, p <0.02; ဝေငှ: r = 0.59, p <0.01; VS: r = 0.57, p <0.02) နှင့် DLPFC (CDT: r = 0.52, p <0.03; ဝေငှ: r = 0.52, p <0.03; VS: r = 0.50, p <0.03) ။
အတွက်အမတ်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအကြားဆက်စပ်မှု Bmax ကို'/Kd'' နှင့်၎င်း၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ဆေးလိပ်သောက်သမိုင်း
အတွင်းအပြောင်းအလဲများ Bmax ကို'/Kd'' VS အတွက် (မြင့်သောဆက်နွယ်နေကြောင်းr = 0.40; p <0.01), မူးယစ်ဆေးဝါးကောင်းသော (r = 0.33; p <0.05), ပျော်ရွှင်သည် (r = 0.33; p <0.05), မငြိမ်မသက်r = 0.38; p <0.02) နှင့်နှိုးဆွ (r = 0.45; p <0.005); PUT တွင်မြင့်မားသော (r = 0.32; p <0.05), မူးယစ်ဆေးဝါးကောင်းသော (r = 0.34; p <0.05) နှင့်နှိုးဆွ (r = 0.46; p <0.005); နှင့် CDT အတွက်နှိုးဆွနှင့်အတူr = 0.32; p <0.05) ။
အတွက်ရာခိုင်နှုန်းအပြောင်းအလဲများကြားက Regression တောင်စောင်း Bmax ကို'/KdVS အတွက် '(မှီခို variable ကို) နှင့် OFC အတွက်ပုံမှန်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှု (တပြင်လုံးကိုဦးနှောက်) ထိန်းချုပ်မှု (ဖြည့်စက်ဝိုင်း) နှင့်အရက်သမားအတွက် (ပွင့်လင်းစက်ဝိုင်း) ။
အပြောင်းအလဲများနှင့်အတူဆက်နွယ်နေကြောင်းကိုမအရက်သေစာမဟုတ်သလိုဆေးလိပ်သောက်သမိုင်း Bmax ကို'/Kd'' အပေါငျးတို့သအရက်သမားပါဝင်သည်ခဲ့ကြသည်အခါ။ သောက်သည်သူကိုသာအအရက်သမားဆန်းစစ်သောအခါမည်သို့ပင်ဖြစ်စေအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်ရှိခဲ့ Bmax ကို'/Kd'နှင့်ဆေးလိပ်သောက် (ထား၏နှစ်ပေါင်း: r = 0.73, p <0.002) နှင့်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းစတင်အသက် (PUT: r = 0.63, p <0.009; VS: r = 0.53, p <0.05) ။
ထိန်းချုပ်မှုအတွက်မဟုတ်အရက်သမားအတွက်အမတ်-သွေးဆောင် DA ပြောင်းလဲမှုများ Prefrontal စည်းမျဉ်း
ထိန်းချုပ်မှုတှငျကြှနျုပျတို့ prefrontal ဒေသများ (OFC, CG, DLPFC) နှင့်ထဲမှာအမတ်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအတွက်အကြွင်းမဲ့အာဏာဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုအကြားတစ်ဦးကအနုတ်အသင်းအဖွဲ့ကိုပြသ Bmax ကို'/KdVS နှင့်ထားအတွက် '(DA ပြောင်းလဲမှုများခန့်မှန်းချက်) ။ ထို့အပြင်ဤဆက်စပ်မှုကိုအနည်းဆုံး OFC အတွက်ကြောင့်ဒေသတွင်းတိကျတဲ့ဖြစ်ပါသည်, ကြောင်းညွှန်ပြတပြင်လုံးကို-ဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပုံမှန်ပြီးနောက် OFC ဆဲဖြစ်ပါသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက် (NAc အတွက် VTA နှင့် DA လွှတ်ပေးရေး DA ဆဲလ် prefrontal စည်းမျဉ်းမှတ်တမ်းတင် preclinical လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Gariano နှင့်အာရှရပင်, 1988; Murase et al ။ , 1993).
အပြောင်းအလဲများအားဖြင့်အကဲဖြတ်အဖြစ်အရက်သမားအတွက်မတူဘဲ, prefrontal ဒေသများတွင်ဇီဝြဖစ် (DA အပြောင်းအလဲများကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းမခံခဲ့ရ Bmax ကို'/Kd') ။ ဒါကအရက်သမားအတွက် prefrontal efferents အားဖြင့် DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှု၏စည်းမျဉ်းနှောင့်အယှက်များနှင့်၎င်းတို့၏ယုတ်လျော့ DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှု DA mesolimbic လမ်းကြောင်း၏ prefrontal စည်းမျဉ်း၏ဆုံးရှုံးမှုကိုကိုယ်စားပြုစေခြင်းငှါကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ VTA အတွက် DA ဆဲလ်ဖို့အဓိကသွင်းအားစုတ prefrontal cortex (ထံမှ glutamatergic efferents ဖြစ်ပါသည်Carr ကနှင့် Sesack, 2000), သူတို့စွဲအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍ (play ကြောင်းကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်Kalivas နှင့် Volkow, 2005) ။ Preclinical လေ့လာမှုများကိုလည်း (အပြုအမူစည်းမျဉ်းပေါ်တွင် prefrontal cortex ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစွဲများတွင်ထိန်းချုပ်မှုများဆုံးရှုံးမှုပံ့ပိုးနာတာရှည်မူးယစ်ဆေးအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူလျော့ကျကြောင်းပြသကြHomayoun နှင့် Moghaddam, 2006) ။ ထို့အပြင်နှင့် CG (inhibitory ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဒေသ, Impulse နှင့်ဆက်နွယ်သောများ၏နှောင့်အယှက်များ) (salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု, compulsive အပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်သည့်များ၏နှောင့်အယှက်နှင့်အတူပါဝင်ပတ်သက်ဒေသ) OFC ၏နှောင့်အယှက် (စွဲလမ်း၏လုပ်ငန်းစဉ်မှဗဟိုစဉ်းစားသည်Volkow et al ။ , 2003).
အဆိုပါရေနံဓါတ်ငွေ့ရှာဖွေရေးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထိန်းချုပ်မှုအတွက် VS အတွက် DA အပြောင်းအလဲများကိုလည်း insula အတွက်ဇီဝြဖစ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ အဆိုပါ insula (ထို densest DA innervation အတူ cortical ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်Gaspar et al ။ , 1989), နှင့်လက်ျာ insula ပျက်စီးမှုရုတ်တရက်ဆေးလိပ်သောက်ရပ်နားခြင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်နေခဲ့သတင်းပို့လတ်တလောလေ့လာမှု (စွဲလမ်းအတွက်၎င်း၏အရေးပါပုံကိုမီးမောင်းထိုးပြNaqvi et al ။ , 2007).
အရက်ဘာသာရပ်များအတွက် DA လွှတ်ပေးရန်လျော့နည်းသွား
အရက်သမားများတွင်အမတ်ထိန်းချုပ်မှုထက် VS နှင့်ထားအတွက်အများကြီးသေးငယ် DA တိုးသွေးဆောင်။ အမတ်တစ်ဦး DAT blocker ဖြစ်ပြီး, DAT ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ပေးထားသောအဆငျ့အဘို့, DA အပြောင်းအလဲများကို (အလိုအလျောက် DA ပမာဏကိုဖြန့်ချိရောင်ပြန်ဟပ်Volkow et al ။ , 1999) ။ အုပ်စုများအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူးထားတဲ့ပလာစမာထဲမှာအမတ်များ၏အာရုံစူးစိုက်မှု, DAT ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏အဆင့်ဆင့်ခန့်မှန်းသောကြောင့် (Volkow et al ။ , 1998, 1999), အမတ်ဖို့တုံးတုံ့ပြန်မှုအရက်သမားထိန်းချုပ်မှုထက်နိမ့် DA လွှတ်ပေးရန်ရှိသည်ဟုအကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါလျှော့အများဆုံးအရက်သမားအတွက်စိတ်ကြွဆေးပြီးနောက် VS အတွက်လျှော့ချ DA တိုး (ထိန်းချုပ်မှုထက် 70% အောက်ပိုင်း) ၏ယခင်တွေ့ရှိချက် corroborates ရာ VS (ထိန်းချုပ်မှုထက် 50% နိမ့်), (အတွင်းဆန်တဲ့ခဲ့ကြသည်Martinez et al ။ , 2005) ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ပစ်ခတ် DA ဆဲလ်ထဲမှာလေးနက်လျှော့ချဖေါ်ပြခြင်း preclinical လေ့လာမှုများ (နဲ့အတူသဘောတူညီချက်လည်းရှိပါတယ်ဒိုင်ယာနာ et al ။ , 1993; ဘေလီ et al ။ , 1998; Shen et al ။ , 2007) VTA နှင့် NAc အတွက် DA လျော့နည်းသွား (Weiss et al ။ , 1996) နာတာရှည်အရက်ကနေဆုတ်ခွာပြီးနောက်။ ဒီလိုငွေပြမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်အရက်ပမာဏကိုစားသုံးရန်အန္တရာယ်မှာသူတို့ကိုထားနိုင်အရက်သမားအတွက် DA VTA-accumbens လမ်းကြောင်း၏ reactivity ကိုလျော့နည်းသွားသည်။ အမှန်စင်စစ်စူးရှသောအရက်အုပ်ချုပ်ရေး (အရက်နှင့်အတူနာတာရှည်ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက် VTA DA ဆဲလ်၏လှုပ်ရှားမှုကို restoresဒိုင်ယာနာ et al ။ , 1996; Weiss et al ။ , 1996).
အရက်သမားလည်းထားအတွက်တုံးအမတ်-သွေးဆောင် DA တိုး (47 ထိန်းချုပ်မှုထက်% အောက်ပိုင်း) ပြသခဲ့သည်။ ဤသည်အများဆုံးဖွယ်ရှိထားရန်စီမံကိန်းကိုမော်တာအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည့် substantia nigra အတွက် DA ဆဲလ်များ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ ထားအတွက် DA လိုငွေပြမှု (အရက်သမားအတွက် extrapyramidal မော်တာရောဂါလက္ခဏာတွေအဘို့ သာ. အားနည်းချက်ရှင်းပြနိုင်Shen, 1984).
ကိုကင်းချိုးဖောက်မှုများယခင်လေ့လာမှုများကိုလည်း (အမတ်-သွေးဆောင် DA တိုး (ထိန်းချုပ်မှုထက် 50% အောက်ပိုင်း) တွင်သိသာထင်ရှားသောလျှော့ချမှတ်တမ်းတင်Volkow et al ။ , 1997), အရာ DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုစွဲတစ်ဘုံမူမမှန်ရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါလျော့နည်းသွားကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အရက်သမားအတွက်အမတ်မှပုဂ္ဂလဒိဋ္ကြိုးတုံ့ပြန်မှုထိန်းချုပ်မှုထက်နိမ့်ခဲ့ကြတယ်။ လွှတ်တော်အမတ်၏ဤပုဂ္ဂလဒိဋ္သက်ရောက်မှု VS အတွက် DA တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုအမတ်ဖို့ကျိုးသကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေအားဖြည့်တုံ့ပြန်မှု VTA DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုလျော့နည်းသွားရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ NAc မှသူတို့စီမံကိန်းကနေတဆင့်အတိုင်းအတာအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက် VTA DA ဆဲလ်တွေ, ရန်, nondrug စစ်ကူဖို့အားဖြည့်တုံ့ပြန်မှုပြောင်းလဲပစ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည် (DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှုအရက်သမားအတွက် nonalcohol ဆုလာဘ်ပေးရန်လျှော့ချ sensitivity ကိုအခြေခံနိုင်လျော့နည်းသွားWrase et al ။ , 2007).
အရက် / နီကိုတင်း comorbidity
ဆေးလိပ်သောက်ခဲ့ကြသူအရက်ဘာသာရပ်များအတွက်, အမတ်-သွေးဆောင် DA အပြောင်းအလဲများကသူတို့ဆေးလိပ်သောက်သမိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ နာတာရှည်နီကိုတင်းလည်း VTA DA ဆဲလ် (၏အလိုအလျောက်လှုပ်ရှားမှုလျော့ကျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကအသင်းအဖွဲ့အရက်နှင့်ဆေးလိပ်မှဘုံလိုက်လျောညီထွေတုံ့ပြန်မှုကိုထင်ဟပ်နိုင်လျူနှင့် Jin က, 2004) ။ DA ပြောင်းလဲမှုများကိုအရက်ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကွေတို့အကြားမဟုတ်သလိုထိန်းချုပ်မှုဆေးလိပ်သောက်ခြင်းနှင့်ကွေအကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်ထိုသို့ DA လျှော့ချရုံဆေးလိပ်သောက်ဖို့တွေကပေါ်ကနေခဲ့မဖြစ်နိုင်ပေမယ့်ဘုံအားနည်းချက်များ (ရောင်ပြန်ဟပ်နိုင်စစ်မှန်သော et al ။ , 1999; Bierut et al ။ , 2004; le et al ။ , 2006).
baseline DA: D2/D3 အဲဒီ receptor အစီအမံ
baseline DA: D2/D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (ယခင်ပုံရိပ် corroborates သော VS အတွက်ထိန်းချုပ်မှုထက်အရက်သမားအတွက်အနိမ့်ခဲ့Heinz et al ။ , 2004; Shen et al ။ , 2007) နှင့် postmortem (Tupala et al ။ , 2001, 2003) လေ့လာမှုများ။
baseline: D2/D3 (သို့သော်မရထိန်းချုပ်မှုမှာ) အရက်သမားအတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု CG နှင့် DLPFC အတွက်ဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဒါကကျနော်တို့အစအခြေခံ striatal: D အကြားတစ်ဦးအသင်းအဖွဲ့အစီရင်ခံရက်များအတွက်မြင့်မားသောမျိုးဗီဇအန္တရာယ်မှာကိုကင်းနှင့်စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများနှင့်ဘာသာရပ်များအတွက်ယခင်တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအတွက်2/D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့် prefrontal ဇီဝြဖစ် (Volkow et al ။ , 1993b, 2001, 2006) ။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ prefrontal ဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘို့ဘဲအရက်သမားများအတွက်သိသာသောအမတ်-သွေးဆောင် DA စသောအပြောင်းအလဲအကြားဆက်စပ်မှုနှင့်အတူခြားနားနေသည်။ ဤသည်ကိုသူတို့ DA neurotransmission ၏ကွဲပြားခြားနားသောအတိုင်းအတာကိုက်ညီဆိုတဲ့အချက်ကိုထင်ဟပ်ဖွယ်ရှိဖြစ်၏ ပြောင်းလဲမှုများ Bmax ကို'/Kd'': D သော်လည်း, DA ဆဲလ်ပစ်ခတ်ရန်တစ် function ကိုသည်နှင့် prefrontal လှုပ်ရှားမှုအားဖြင့် modulated သော DA အာရုံခံထံမှ DA လွှတ်ပေးရန်, ရောင်ပြန်ဟပ်2/D3 အဲဒီ receptor ရရှိမှုအများအားဖြင့်ယူဆရကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာမှမဟုတ်ဘဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှုအသုံးပြုပုံမျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဗီဇလုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှုအချက်များအားဖြင့် modulated ပေမယ်ဖြစ်ကြောင်းအဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်။ ထို့ကြောင့်အခြေခံအကြားအသင်းအဖွဲ့: D2/D3 receptors (prefrontal cortical ဒေသ dopaminergic မော်ဂျူထင်ဟပ်ဖွယ်ရှိသည်Oades နှင့် Halliday, 1987) ။ အမှန်စင်စစ်အရက်သမားအတွက် VS အတွက် D2R ရရှိနိုင်မှုအတွက်လျှော့ချ (အရက်တဏှာပြင်းထန်မှုနှင့်အတူနှင့် medial prefrontal cortex ပိုမို cue-သွေးဆောင် activation နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ပြသခြင်းနှင့် functional သံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ်နှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ် CG anterior ပြီHeinz et al ။ , 2004).
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အရက်သမားအကြား (တိုကျရိုကျ cortex အပါအဝင်) ဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်အတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုမပြခဲ့ပါဘူး။ ဤသည်ပြန်လည်သုံးသပ် (အရက်သမားအတွက်တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်အတွက်လျှော့ချပြသသောယခင်လေ့လာမှုများ, ကနေမတူတွေ့ ဝမ် et al ။ , 1998) ။ သို့သော်ဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်အတွက်လျှော့ချ ((အထူးသဖြင့်တိုကျရိုကျ cortex အတွက်) detoxification ၏ 2-4 ရက်သတ္တပတ်အတွင်းသိသိသာသာ recover ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့Volkow et al ။ , 1994b), ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘာသာရပ်များအတွက်လျှော့ချကြည့်ဖို့ပျက်ကွက်သူတို့ကလေ့လာမှုမပြုမီအရက်ကိုအနည်းဆုံး 30 ဃကနေဆုတ်ခွာခဲ့သည့်အချက်ကိုထင်ဟပ်နိုင်ဘူး။
ပထမဦးစွာ [ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့18F ကို] FDG [ကလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါခဲ့ 120 မိ၏တစ်ဝက်ဘဝကိုရှိပါတယ်11ကို C] ထိုနေ့ရက်တွင် raclopride အစီအမံ (10 ဇထိုးအကြားလိုအပ်သည်) ။ ဘာသာရပ်များသီးခြားရက်ကိုစမ်းသပ်သည့်အခါသို့သော်အခြေခံဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်အစီအမံများနှင့်အမတ်-သွေးဆောင် DA ပြောင်းလဲမှုများအစီအမံ (တည်ငြိမ်ကြောင့်ဝမ် et al ။ , 1999a,b), အဆက်စပ်မှုကြောင့်ထိုနေ့ရက်တွင်သူတို့ကိုစမ်းသပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်သမျှအလားတူခဲ့ကြပြီနိုင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှုလုံးဦးနှောက်ဇီဝြဖစ်ဖို့ပုံမှန်အခါကဤဒေသများ၌, အသင်းအဖွဲ့များပဏာမအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရပါမည်ဒါကြောင့်ဒုတိယ, CG, DLPFC နှင့် insula အတူဆက်စပ်မှု, သိသာဘူး။ ဒါ့အပြင်ဆက်စပ်မှုသေချာပေါက်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်အသင်းအဖွဲ့များဆိုလိုဘူးမဟုတ်သလိုသူတို့ directionality ဖော်ပြကြဘူးဤသို့ကျနော်တို့မဟုတ်ဘဲ DA လွှတ်ပေးရေး prefrontal စည်းမျဉ်းထင်ဟပ်ထက်အသင်းအဖွဲ့ prefrontal ဒေသ DA မော်ဂျူထင်ဟပ်ကြောင်းထွက်အုပျစိုးနိုငျပါဘူး။
တတိယအချက်လျှော့ချအခြေခံ: D2/D3 အတူတိုင်းတာတဲ့အခါမှာအဲဒီ receptor ရရှိမှု [11ကို C] raclopride (အနိမ့်အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်တိုးလာ DA လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စေထင်ဟပ်နိုင်Gjedde et al ။ 2005) ။ သို့သော်အရက်သမား, အမတ်ပေးထားလျှော့ DA လွှတ်ပေးရန်ပြသသည့်အခါဆိုတဲ့အချက်ကို D ကို၏အနိမ့်အခြေခံအတိုင်းအတာကိုညွှန်ပြ2/D3 ယခင်က postmortem လေ့လာမှုများအားဖြင့်အစီရင်ခံအဖြစ်အရက်သမားအတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု (ရောင်ပြန်ဟပ်Tupala et al ။ , 2003: D ၏), အနိမ့်အဆင့်ဆင့်2 receptors ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆေးလိပ် (ကရှက်ကြောက်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အရက်သမားမီးခိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ~90%Batel et al ။ , 1995), ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အရက်သမားအများစုမှဆေးခန်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြသည်။
ဤရလဒ်သည်အရက်သမားအတွက် DA ဆဲလ်လှုပ်ရှားမှု၏ prefrontal မော်ဂျူတဲ့ဆုံးရှုံးမှုနှင့်ဤဘာသာရပ်များအတွက် DA လှုပ်ရှားမှုအတွက်လေးနက်လျှောက်လျော့နည်း၏အယူအဆနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ကြသည်။ အမတ်လုပ်ဖို့ VS အတွက်တုံး DA တိုးနှင့်လျှော့ချကြိုးတုံ့ပြန်မှုအကြားဆက်ဆံရေး DA မူမမှန်အရက်သမားခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့အဆိုပါ anhedonia အခြေခံဖြစ်နိုင်သည်နှင့်ဤလိုငွေပြမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးရန်ယန္တရားအဖြစ်အရက်အလွဲသုံးစားမှုဘို့မိမိတို့အန္တရာယ်အထောက်အကူပြုစေမည်အကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကြားဝင် prefrontal စည်းမျဉ်း restore ကိုအကြံပြုနှင့် DA လိုငွေပြမှုအရက်သမားအတွက်ကုထုံးအကျိုးရှိသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဇူလိုင်လ 25, 2007 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
တည်းဖြတ်မူအောက်တိုဘာလ 2, 2007 ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
လက်ခံအောက်တိုဘာလ 2, 2007 ။
ဤလုပ်ငန်းကိုအရက်နှင့်အရက်အလွဲသုံးမှုအပေါ်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနများ၏ဦးစီးဌာန (ဇီဝဗေဒနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်သုတေသနရုံး, စာချုပ် DE-AC01-76CH00016) က, နှင့်အမျိုးသားများကကနျြးမာရေး-အမျိုးသား Institute ၏အမျိုးသား Institutes ၏ Intramural သုတေသနအစီအစဉ်အားဖြင့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ခံခဲ့သည် စိတ်ကျန်းမာရေး Grant က MH66961-02 ၏ Institute မှ။ ကျနော်တို့ပေစစ်ဆင်ရေးများအတွက် Donald ဖြစ်တဲ့ Warner ကျေးဇူးတင်; cyclotron စစ်ဆင်ရေးများအတွက်ဒါဝိဒ်သည် Schlyer နှင့်မိုက်ကယ် Schueller; ပေအစီအမံများ၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုဒါဝိဒ် Alexoff နှင့်ပေါလု Vaska; Colleen Shea, Lisa ကို Muench နှင့် Youwen Xu radiotracer ပေါင်းစပ်သည် ဖြစ်. , သူနာပြုစောင့်ရှောက်မှုအဘို့အပေါ်လင်း Carter က; protocol ကိုညှိနှိုင်းဘို့ကရင် Apelskog; နှင့်အယ်ဒီတာအဖွဲ့အကူအညီအတွက်လင်ဒါသောမတ်စ်။
စာပေးစာယူဒေါက်တာ Nora ဃ Volkow, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, 6001 အလုပ်အမှုဆောင် Boulevard, ROOM တွင် 5274, Bethesda, MD 20892 မှကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသင့်ပါတယ်။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
အာရုံကြောသိပ္ပံ 2007-0270 / 6474 / 07-2712700 $ 07 / 15.00 များအတွက်မူပိုင်ခွင့်©0Society က
Watson ဟာ WP,
Wonnacott S က,
Little က HJ
(1998) နာတာရှည်အီသနောအုပ်ချုပ်ရေးရုပ်သိမ်း hyperexcitability ၏ချုပ်ရာပြီးနောက် ventral tegmental ဧရိယာတွင် neuron အတွက်လှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲ။ ဦးနှောက် Res 24: 144-152 ။
Batel P ကို,
Pessione က F,
Maitre ကို C,
Rueff B ကို
ဆေးလိပ်သောက်တဲ့သူအရက်သမားတို့တွင်အရက်နှင့်ဆေးလိပ်မှီခိုအကြား (1995) ဆက်ဆံရေး။ စှဲမွဲမှု 90: 977-980 ။
Foroud T က,
Begleiter H ကို,
Conneally pm တွင်,
Hesselbrock V ကို,
Li က TK,
Nurnberger JI ဂျူနီယာ,
Porjesz B က,
Reich T က
အရက်သမား၏မိသားစုများအတွက်လေ့ဆေးလိပ်သောက်ဘို့ (2004) တစ်ဦးက Genomics စကင်: ပစ္စည်းဥစ္စာမှီခိုမှာကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့နှင့်တိကျသောမျိုးရိုးဗီဇအချက်များ။ နံနက် J ကို Med မျိုးရိုးဗီဇတစ်ဦးက 124: 19-27 ။
Carr က DB,
ကြွက် prefrontal cortex ကနေ ventral tegmental ဧရိယာမှ (2000) ပရောဂျက်: mesoaccumbens နှင့် mesocortical အာရုံခံအတူ Synaptic အသင်းအဖွဲ့များအတွက်ပစ်မှတ်သတ်မှတ်ချက်။ J ကို neuroscience 20: 3864-3873 ။
Collins က DL,
အီဗန် AC အ
(1995) အလိုအလျောက် 3-D ကိုမော်ဒယ်-based neuroanatomical segment ။ Hum ဦးနှောက် Mapp 3: 190-208 ။
ဒိုင်ယာနာ M က,
Pistis M က,
Carboni S က,
ကြွက် electrophysiological နှင့်ထဲကဓာတုပစ်စညျးသက်သေအထောက်အထားအတွက်အီသနောဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါစဉ်အတွင်း mesolimbic dopaminergic အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု (1993) လေးနက်လျှော့။ proc Natl Acad သိပ္ပံယူအက်စ်အေ 90: 7966-7969 ။
အီသနောဆုတ်ခွာ syndrome ရောဂါ outlasts (1996) Mesolimbic dopaminergic လျော့ချရေး: ပေါ်ထွက်လာသောကြောင့်ရှည်ကြာ abstinence အထောက်အထား။ neuroscience 71: 411-415 ။
လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုတာဝန်ယူမှုကိုအကဲဖြတ်အတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္-သက်ရောက်မှုတိုင်းတာ (1991) Utility ကို။ br J ကိုစွဲ 86: 1563-1570 ။
(1988) ကို medial prefrontal နှင့် anterior cingulate cortical ၏ဆွခြင်းဖြင့် midbrain dopamine အာရုံခံအတွက်သွေးဆောင်ပစ်ခတ်ကျူးဧသောအသံကို။ ဦးနှောက် Res 462: 194-198 ။
Gaspar P ကို,
Berger B က,
tyrosine hydroxylase နှင့် dopamine-beta-hydroxylase ၏နှိုင်းယှဉ် immunohistochemistry အားဖြင့်ထင်ရှားသကဲ့သို့လူ့ဦးနှောက် cortex ၏ (1989) catecholamines innervation ။ J ကို comp Neurol 279: 249-271 ။
Wong က DF,
ရို-Neto P ကို,
Cumming P ကို
တိုးတက်မှု၏ 2005 နှစ်ကြာစည်းနှောင်အလားအလာများ၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်အနက်အပေါ်: (20) အလုပ်မှာ neuroreceptors စီမံလျာထားခြင်း။ int ဗြာ Neurobiol 63: 1-20 ။
Hamilton က M ကို
(1959) အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အားဖြင့်စိုးရိမ်စိတ်ပြည်နယ်များ၏အကဲဖြတ်။ br J ကို Med Psychol 32: 50-55 ။
စိတ်ကျရောဂါများအတွက် (1960) တစ်ဦးကအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စကေး။ J ကို Neurol Neurosurg စိတ်ရောဂါကုသမှု 23: 56-62 ။
Siessmeier T က,
Wrase J ကို,
Klein က S,
Grusser သည် SM,
flor H ကို,
dopamine: D (2004) အကြား (2) ညမညသဘောတရားဟာ ventral striatum နှင့်အရက်တွေကိုနှင့်တဏှာ၏ဗဟိုအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက် receptors ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 161: 1783-1789 ။
Homayoun H ကို,
Moghaddam B ကို
ထပ်ခါတလဲလဲစိတ်ကြွဆေးတုံ့ပြန် medial prefrontal နှင့် orbitofrontal cortex အတွက်ဆယ်လူလာအလိုက်သင့်ပြောင်းလဲနေထိုင်၏ (2006) တိုးတက်မှု။ J ကို neuroscience 26: 8025-8039 ။
ဆုလာဘ်-related လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်အမူအကျင့်များထိန်းချုပ်ရေးအတွက်သက်ရောက်မှုတွေ: မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအတွက် frontostriatal ကမောက်ကမဖြစ်မှုကနေရရှိလာတဲ့ (1999) Impulse ။ Psychopharmacology (Berl) 146: 373-390 ။
ကိုကင်းစွဲအတွက် (2004) အချိုမှုစနစ်များကို။ Curr Opin Pharmacol 4: 23-29 ။
(2005) စွဲလမ်း၏အာရုံကြောအခြေခံ: လှုံ့ဆျောမှုနှင့်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရောဂါဗေဒ။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 162: 1403-1413 ။
Hyytia P ကို,
Weiss က F
အီသနောဆုလာဘ်များနှင့်မှီခိုအတွက် (1998) Neurocircuitry ပစ်မှတ်။ အရက် Clin Exp Res 22: 3-9 ။
Li က Z ကို,
Shram M က,
Shaham Y ကို
(2006) ရွေးချယ်မြင့်မားသောအရက်စားသုံးမှုများအတွက်ရပ်ကြီးကြွက်များ၏အရက်-ရင်တော့မှားမယ်သားစဉ်မြေးဆက်အတွက်နီကိုတင်း Self-အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် relapse မှအားနည်းချက်တိုးမြှင့်။ J ကို neuroscience 26: 1872-1879 ။
Jin က WQ
နီကိုတင်းဆုတ်ခွာကြွက်များတွင် ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံလှုပ်ရှားမှု (2004) Decrease ။ NeuroReport 15: 1479-1481 ။
Schlyer DJ သမား,
Bendriem B က,
လူ့ဘာသာရပ်များအတွက်ကင်းပေလေ့လာမှုများ - (- -) (1990) အချိန်-လှုပ်ရှားမှုတိုင်းတာကနေ binding Reversible လုပ် radioligand ၏ Graphical ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ [N-11C-methyl] မှလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 10: 740-747 ။
gil R ကို,
Slifstein M က,
Huang က Y ကို,
Kegeles L ကို,
Talbot P ကို,
Krystal J ကို,
Laruelle M က,
ဗြ Dargham တစ်ဦးက
(2005) အရက်မှီခိုအဆိုပါ ventral striatum အတွက်တုံး dopamine ဂီယာနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 58: 779-786 ။
Murase S က,
Grenhoff J ကို,
(1993) Prefrontal cortex Vivo အတွက်လေ့လာခဲ့ကြွက် mesolimbic dopamine အာရုံခံအတွက်ကွဲပစ်ခတ်ရန်နှင့် transmitter ကိုလွှတ်ပေးရန်ထိန်းညှိ။ neuroscience လက်တ 157: 53-56 ။
Damasio H ကို,
အဆိုပါ insula မှ (2007) ပျက်စီးခြင်းစီးကရက်ဆေးလိပ်မသောက်ရန်စွဲ disrupts ။ သိပ္ပံ 315: 531-534 ။
မူးယစ်ဆေးစွဲ၏ (2004) မော်လီကျူးယန္တရားများ။ Neuropharmacology 47 (ပျော့ပျောင်း 1): 24-32 ။
Halliday GM က
(1987) Ventral tegmental (A10) စနစ်: neurobiology ။ 1 ။ ခန္ဓာဗေဒနဲ့ဆက်သွယ်မှု။ ဦးနှောက် Res 434: 117-165 ။
Huang က SC,
Selin ကို C,
Sokoloff L ကို,
(က F-1979) 18-fluoro-2-deoxy-D-ဂလူးကို့စတွေနဲ့လူသားများတွင်ဒေသခံနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝဖြစ်စဉ်မှုနှုန်း၏ (2) Tomographic တိုင်းတာခြင်း: နည်းလမ်း၏အတညျပွု။ အမ်း Neurol 6: 371-388 ။
(2002) Limbic-striatal မှတ်ဉာဏ်စနစ်များနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲ။ Neurobiol Mem ကိုလေ့လာပါ 78: 625-636 ။
Thompson က AC အ
အထပ်ထပ်လှုံ့ဆော်သို့မဟုတ်အီသနောကုသမှုအောက်ပါ ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံဆဲလျလူဦးရေလှုပ်ရှားမှုအတွင်း (2007) Long-term လျော့ချရေး။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 61: 93-100 ။
အရက်ရုပ်သိမ်းရေးနှင့်ဆက်စပ် (1984) Extrapyramidal ရောဂါလက္ခဏာတွေ။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 19: 1037-1043 ။
Reivich M က,
des Rosiers MH,
Shinohara က M
(1977) ဒေသခံနှောက်ဂလူးကို့စအသုံးချ၏တိုင်းတာခြင်းများအတွက် [14C] deoxyglucose နည်းလမ်း: သီအိုရီ, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်သတိနှင့်ထုံဆေး albino ကြွက်များတွင်ပုံမှန်တန်ဖိုးများ။ J ကို Neurochem 28: 897-916 ။
က Madden PA ဆိုပြီး,
Heath AC အ,
Eisen လုပ် SA,
Goldberg က J ကို,
Tsuang M က
(1999) ယောက်ျားအတွက်နီကိုတင်းနှင့်အရက်မှီခိုဘို့အဖြစ်များသည့်မျိုးဗီဇအားနည်းချက်။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 56: 655-661 ။
ခန်းမ H ကို,
Bergstrom K သည်,
Sarkioja T က,
Rasanen P ကို,
Mantere T က,
Callaway J ကို,
Hiltunen J ကို,
Tiihonen J ကို
(2001) Dopamine: D (2) / D ကို (3) -receptor နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထုနျူကလိယ accumbens နှင့်အမျိုးအစား 1 နှင့်2အရက်သမား၏ amygdala ၌တည်၏။ Mol စိတ်ရောဂါကုသမှု 6: 261-267 ။
အမျိုးအစား 2003 နှင့်2အရက်သမားအတွက် (1) Dopamine D2 receptors နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလူ့မြေတပြင်လုံး hemisphere autoradiography နှင့်အတူတိုင်းတာ။ Hum ဦးနှောက် Mapp 20: 91-102 ။
MacGregor R ကို,
Shea ကို C,
Angrist B က,
Carbon-1993-raclopride လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ binding ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံများ (11a) Reproducibility ။ J ကို Nucl Med 34: 609-613 ။
(1993b) dopamine D2 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကိုကင်းချိုးဖောက်လျှော့တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်နှင့်ဆက်စပ်သည်လျော့သွားသည်။ synapses 14: 169-177 ။
Lieberman J ကို,
Pappas N ကို,
Cooper က T က,
(1994a) လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ [11C] raclopride နှင့်အတူ endogenous dopamine ယှဉ်ပြိုင် Imaging ။ synapses 16: 255-262 ။
detoxified အရက်သမားအတွက်ဦးနှောက်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်၏ (1994b) Recovery ကို။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 151: 178-183 ။
(1997) detoxified ကင်း-မှီခိုဘာသာရပ်များအတွက် striatal dopaminergic တုန့်ပြန်လျော့သွားသည်။ သဘာဝ 386: 830-833 ။
ပါးစပ် methylphenidate ၏ကုထုံးဆေးများအားဖြင့်သွေးဆောင်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ (1998) Dopamine Transporter အလုပ်အကိုင်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 155: 1325-1331 ။
သွေးကြောသွင်း methylphenidate အားဖြင့် striatal dopamine ပို့ဆောင်ရေး (1999) ပိတ်ဆို့ထားခြင်း၏ Self-အစီရင်ခံစာများသွေးဆောင်ဖို့လုံလောက်သောမဟုတ်ပါဘူး "မြင့်မားတဲ့။ " J ကို Pharmacol Exp Ther 288: 14-20 ။
Chang က L ကို,
Sedler M က,
Gatley J ကို,
Wong ကနေ C,
စိတ်ကြွဆေးချိုးဖောက်မှုများဦးနှောက် dopamine D2001 receptors ၏ (2) အနိမျ့အဆငျ့: အ orbitofrontal cortex အတွက်ဇီဝြဖစ်တွေနဲ့ပေါင်းသင်း။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 158: 2015-2021 ။
Maynard L ကို,
Zhu W က,
ပါးစပ် methylphenidate နှင့် extracellular dopamine အတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် dopamine ပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့အကြား (2002) ဆက်ဆံရေး: ကုထုံးဂယက်ရိုက်။ synapses 43: 181-187 ။
(2003) ကစွဲလူ့ဦးနှောက်: ပုံရိပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ထိုးထွင်းသိမြင်။ J ကို Clin Invest 111: 1444-1451 ။
Telang က F,
ma Y ကို,
စတိန်း R ကို,
အရက်မိသားစုများ၏ထိခိုက်အင်္ဂါများ၌ dopamine D2006 receptors ၏ (2) မြင့်မားသောအဆင့်အတန်း: တတ်နိုင်သမျှအကာအကွယ်အချက်များ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 63: 999-1008 ။
Roque မှန် CT,
Levy AV စနစ်,
Dhawan က AP
ventricular ပျတိုးနှင့်ပေ, MR ပုံရိပ်နှင့် neuropsychologic စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတူအကဲဖြတ်အဖြစ်ကျန်းမာဘာသာရပ်များနှင့်အရက်သမားအတွက် cortical ကျုံ့၏ (1993) Functional အရေးပါမှု။ ဒီယိုရောင်ခြည်ကုသမှုပညာ 186: 59-65 ။
Pascani K သည်,
(1997) အပြုအမူများနှင့်ပုံမှန်ဘာသာရပ်များနှင့်ကိုကင်းချိုးဖောက်သွေးကြောသွင်း methylphenidate ၏နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ EUR စွဲ Res 3: 49-54 ။
Wong ကမှန် CT,
(1998) အလယ်အလတ်ပြင်းထန်မှု၏အမျိုးသမီးအရက်သမားအတွက်ဒေသဆိုင်ရာနှောက်ဇီဝြဖစ်ထိန်းချုပ်မှု၏ကှာခွားမထားဘူး။ အရက် Clin Exp Res 22: 1850-1854 ။
Wong ကမှန် CT
(1999a) စာရင်းအင်း parametric မြေပုံများအား အသုံးပြု. lorazepam မှဒေသဆိုင်ရာဦးနှောက်ဇီဝဖြစ်စဉ်တုံ့ပြန်မှု၏ reproducibility တိုင်းတာခြင်း။ J ကို Nucl Med 40: 715-720 ။
Netusil N ကို
methylphenidate တုံ့ပြန်အတွက်လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ [1999C] raclopride နှင့်အတူ endogenous dopamine ယှဉ်ပြိုင်မှု၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံများ (11b) Reproducibility ။ J ကို Nucl Med 40: 1285-1291 ။
Weiss က F,
Hyytiä P ကို,
(1996) အီသနော Self-အုပ်ချုပ်ရေးမှီခိုကြွက်များတွင် accumbal dopamine နဲ့ 5-hydroxytryptamine လွှတ်ပေးရန်အတွက်ဆုတ်ခွာ-ဆက်စပ်ချို့တဲ့ restores ။ J ကို neuroscience 16: 3474-3485 ။
White က FJ,
Zhang က XF,
ကိုကင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြွဆေး၏ (1995) ထပ်ခါတစ်လဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးအတွက် mesoaccumbens dopamine စနစ်အချိုမှုမှအာရုံခံတုံ့ပြန်မှုပွောငျးလဲ။ J ကို Pharmacol Exp Ther 273: 445-454 ။
Schlagenhauf က F,
Kienast T က,
Wustenberg T က,
Bermpohl က F,
Kahnt T က,
Knutson B က,
ဆုလာဘ်အပြောင်းအလဲနဲ့၏ (2007) အလုပ်မဖြစ် detoxified အရက်သမားအတွက်အရက်တဏှာနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ NeuroImage 35: 787-794 ။
အဝလွန်ခြင်းအတွက် Dopamine D2 /3အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုနှင့်စိတ်ကြွဆေး-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန် Psychopharmacology ၏ဂျာနယ်, 1 စက်တင်ဘာလ 2014, 28 (9): 866-873
ဆေးခြောက်ချိုးဖောက် dopamine ဦးနှောက် reactivity ကိုအနုတ်လက္ခဏာစိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်စွဲပြင်းထန်မှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်လျော့နည်းသွား PNAS, 29 ဇူလိုင်လ 2014, 111 (30): E3149-E3156
စိတ်ရောဂါဖြားနာအတွက်ဆုကြေးတိုက်နယ်အလုပ်မဖြစ်၏ mechanisms: Prefrontal-Striatal ဆက်သွယ်မှုသည် အဆိုပါအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင် 1 ဖေဖော်ဝါရီလ 2014, 20 (1): 82-95
နာတာရှည်ကင်း D1 receptor signal ကျော်ကင်းမူးနှင့် Unbalances D2 စဉ်အတွင်း Dopamine signal Dampens အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,2အောက်တိုဘာလ 2013, 33 (40): 15827-15836
လူသားတွေဟာအတွက် D-ဖက်တမင်းဆေးပြား-သွေးဆောင် Striatal Dopamine တုံ့ပြန်မှုနှင့်အတူတိုကျရိုကျ cortical ထူ Correlate အတွက်တစ်ဦးချင်းကွာခြားချက်များ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်, 18 စက်တင်ဘာလ 2013, 33 (38): 15285-15294
ဦး နှောက်ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုတွင် Dopamine ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖျန်ဖြေရာတွင် D2 Receptors ၏လွှမ်းမိုးမှု - အရက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ဂျာနယ်,6မတ်လ 2013, 33 (10): 4527-4535
အရက်မူတည်နှင့်အတူ Comorbid bipolar Disorder သို့မဟုတ်စီးပွားပျက်ကပ်နှင့်အတူလူနာများ၏2နှစ်ရလဒျ၏၏အခြင်းအချက်များ: အစောပိုင်း Abstinence ၏အရေးပါမှု အရက်နှင့်အရက်, 1 ဇန်နဝါရီလ 2013, 48 (1): 93-98
လူမှုဆုကြေးမူတည်နှင့်ဦးနှောက်အဖြူအရေးပါ Microstructure ဦးနှောက် Cortex, 1 နိုဝင်ဘာလ 2012, 22 (11): 2672-2679
Stop မှရပ်တန့်ဖြစ်ဖြစ်မဖြစ်ဖြစ်လော သိပ္ပံ,3ဖေဖော်ဝါရီလ 2012, 335 (6068): 546-548
အရက်စားသုံးမှုလူ့ Orbitofrontal Cortex နှင့်နျူကလိယ Accumbens အတွက် Endogenous Opioid ဖြန့်ချိ Induces Science Translational Medicine, 11 ဇန်နဝါရီလ 2012,4(116): 116ra6
စွဲ: dopamine ဆုလာဘ် circuitry အပြင် PNAS, 13 စက်တင်ဘာလ 2011, 108 (37): 15037-15042
Schizophrenia - Comorbidity ၏လက်တွေ့သက်ရောက်မှုအတွက်ပစ္စည်းအသုံးပြုမှုရောဂါ Schizophrenia သတင်းလွှာ, 1 မေလ 2009, 35 (3): 469-472